MAQAAL:- Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ah? | Monday, June 26th, 2017	Home
MAQAAL:- Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ah?
May 20, 2017 - jawaab	Waxaan qormadan kaga hadli doonaa haddii uu Rabbi idmo mowduuc aad u mihiimsan, Kaasi oo loo baahan yahay in ay ka doodaan dadweynaha Soomaaliyeed ee iska leh dalkan baylahda ah sida Culimada, Aqoonyahanada, Odayaasha Dhaqanka iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka kortay aragtida gaaban ee ku dhisan qabiilka, deegaanka iyo waliba kooxda. Mawduucan, Ayaa ku saabsan nooca xal ee ay Soomaaliya u baahan tahay waqti-xaadirkan la joogo: Ma xal siyaasadeed mise xal caskari ?
Gabogabadii iyo gunaanudkii, Haddii aan mar kale iseydiinno: Soomaaliya ma waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed mise xal caskari ? Jawaabtu, Waxaan leenahay Soomaaliya waxa ay u baahan tahay xal siyaasadeed iyo dib-uheshiin qura maadaama xalkii caskari ahaa lagu guuldareystay nooc kasta oo loo doonaba, Taana waxaa daliil u ah 27 sano oo dagaal sokeeye ah. Waxaa sidoo kale daliil u ah cadiimadii shisheeye ee dalkan yimid sida UNITAF, UNISOM iyo waliba Itoobiyankii faraha badnaa ee uu dalka soo geliyey Cabdulaahi Yuusuf, Kuwaasi oo dhamaantood ku fashilmay howlihii ay Soomaaliya u yimaadeen.